मन्दिरा मधुश्रीको कथाकृति 'बुधनको घोडी' माथि अन्तरक्रिया | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ फाल्गुन ९, बुधबार , नेपाली समय : १०:३३ pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
मन्दिरा मधुश्रीको कथाकृति 'बुधनको घोडी' माथि अन्तरक्रिया
२०७४ मंगसिर ८, शुक्रबार ०६:४२ pm | आजको पत्रिका
काठमाडौँ, ८ मंसिर, कथाकार मन्दिरा मधुश्रीको कथाकृति बुधनको घोडीमाथि अन्तरक्रिया भएको छ । बिहीबार काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सो कथाकृतिमाथि परिचर्चा भएको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार रेशम विरहीले मन्दिरा मधुश्री महिला भएर पनि पुरुष संवेदनामा कलम चलाउन सक्ने सशक्त कथाकार भएको उल्लेख गरे । यो कृतिका कथाले भूईमान्छेको उठान गरेको र समाजलाई नजिकबाट नियालेको पनि उनले बताए । उनले कृतिमा समावेश भएका कथा मध्ये शीर्ष कथा नै उत्कृष्ट भएको उल्लेख गरे । उनले पुस्तकको सम्पादन र भाषामा कमजोरी रहेको भन्दै आलोचना पनि गरे ।
कथाकार बाबुराम लामिछानेले कृतिको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया आउनु पर्नेमा जोड दिए । नकारात्मक प्रतिक्रियाले आफूलाई निखार्ने बताउँदै लामिछानेले सकारात्मक पक्षमात्रै बाहिर आए कथाकार हौसिने दाबी गरे । कथा लेखनकालागि ठूलो तपस्या चाहिने र सो तपस्याले नै कथा राम्रो बन्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्दिरामा त्यो गुण भएको बताए ।
यसैगरी अन्तरक्रियामा तीर्थराज वन्त, माया ठकुरी, श्रीओम श्रेष्ठ रोदन, मुरारी पोखरेल, शीतल गिरी, डा. प्रदीप मैनाली, जुजुभाइ डङ्गोल, शान्ति शर्मा, जीवन अधिकारी, लक्ष्मीकुमार कोइराला, तलसीहरी कोइराला लगायतले पुस्तक र त्यसमा संग्रिहित कथाका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
यो अन्तरक्रियाको संयोजन डा. सनदकुमार वस्तीले गरेका थिए । पुस्तकालयले आयोजना गर्ने यस्तो सिर्जना संवाद कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो बिहीबार हुँदै आएको छ ।